Tue, Jul 14, 2020 at 2:11am
झुक्किएर पनि बढी नखानुहोस् यी चिजहरू, घट्नसक्छ स्मरण शक्ति
काठमाडौँ, ७ साउन के तपाईँ चाहनुहुन्छ, आफ्नो स्मरण शक्ति घटाउन ? यदि चाहनु हुन्न भने नखाने गर्नुहोस् । यी चिजहरू जसको सेवन गर्दा तपाइको स्मरण शक्ति घटेर जाने गर्दछ । बढी चिल्लो बढी चिल्लो खानेकुरा खान त सबैलाई नै मन पर्ने गर्दछ । तर हामीले बढी चिल्लो खानेकुराको सेवन गर्छौँ त हाम्रो श्रवणशक्ति र स्मरणशक्ति हराउँदै जाने गर्दछ । चुइङगम चुइङगम चपाउनु कसलाई पो मन..
मोटोपनको समस्या ! लुगा लगाउँदा ठूलो पेट कसरी लुकाउने ?
काठमाडौं, ७ साउन । मोटोपन आधुनिक जीवनशैलीमा सबैको लागि समस्या बनिरहेको छ । सुन्दर देखिने प्रतिस्पर्धा बढिरहेको समयमा लुगा लगाउँदा मोटोपनले व्यक्तित्वमा असर गर्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ । तर, यदि लुगालाई मिलाएर लगाउन जानियो भने मोटोपनलाई पनि लुकाउन सकिन्छ। आजकल हाइवेस्ट लेगिङ्ग्स र जेगिङ्ग्सको चलन आएको छ । जुन मोटोपन भएकाहरुको लागि फाइदाको पक्ष हो । लो वेस्ट अथवा कम्मर मुनीको भागमा..
वैवाहिक जीवनलाई कसरी सुमधुर बनाउने ?
काठमाडौँ, ७ साउन दुई व्यक्ति एक हुनु मात्र विवाह नभएर उनीहरुको विश्वास, एक-अर्काप्रतिको सम्मान, माया, प्रेम र दुई परिवारप्रतिको दायित्व पनि बराबर हुनु विवाह हो । वैवाहिक जीवनमा यी कुराहरु भएमा मात्र एउटा विवाह सफल हुन सक्छ र वैवाहिक जीवन सुमधुर हुन्छ । वैवाहिक जीवनलाई कसरी सुमधुर बनाउने ? हाम्रो वरपर भएका कतिपय दम्पतिहरुलाई हामी एकदम खुशी र सुखी देख्छौ । उनीहरुको..
बिहानै तातोपानीमा कागती र मह मिसाएर खाँदा हुन्छन् यस्ता फाइदा
काठमाडौँ, ६ साउन १. पाचन प्रकृयामा सुधार बिहान तातो पानीमा मह र कागती मिसाएर खानाले पेट सफा राख्न मद्दत गर्नुका साथै कलेजोमा रसको उत्पादनलाई बढाउँछ, जसबाट पाचन प्रक्रियामा मद्दत मिल्छ । कागतीमा रहेको एसिडले पाचनप्रणालीलाई मजबूत पार्न मद्दत गर्छ र अवान्छित विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्छ । यसका अलावा महले एक एन्टीब्याक्टेरियलको रुपमा काम गर्छ र शरीरमा रहेको कुनै पनि प्रकारको संक्रमण हटाउँन..
काठमाडौँ, ६ साउन जीवनभर साथका लागि विवाह गरिन्छ । त्यसैले विवाहपछिको जीवनलाई सुखद बनाउनका लागि एक–अर्कालाई बढीभन्दा बढी समय दिन आवश्यक हुन्छ । पति–पत्नीले सँगै बिताएको समयले एक–अर्कामा खुसीको सञ्चार गर्छ । विवाहपछि विभिन्न समस्या आउन सक्छन् । त्यस्ता समस्यालाई सुल्झाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प रहँदैन । यस्तो अवस्थामा एक–अर्काको सल्लाहमा समाधानको खोजी गर्न आवश्यक हुन्छ । करिअर सफल हुनुलाई मात्र दाम्पत्य जीवन..
मनसुनी न्यूनचापीय रेखा पुनः नेपाल प्रवेश, ३ दिन देशभर भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ, ६ साउन मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको दक्षिण भू–भागमा अवस्थित रहेकाले आगामी तीन दिन देशभर मध्यमदेखि भारी वर्षा हुनसक्ने जनाइएको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् राजु प्रधानाङले यो समयमा मनसुनी ‘ट्रफ’ कहीले तल कहिले माथि भइरहने जानकारी दिँदै न्यून चापीय रेखा जहाँ रहन्छ त्यहाँ भारी वर्षा हुने बताउनुभयो । केही दिनअघि दक्षिण सरेको न्यूनचापीय रेखा सोमबार पुनः नेपाल..
स्विमिङ पुल होइन, झरीमा भिज्न दिनुहोस् आफ्नो बालबच्चालाई
काठमाडौँ, ६ साउन मनसुनको समय छ । जुनसुकैबेला पानी दर्किन सक्छ । विद्यालय जाँदै गरेका वा विद्यालयबाट र्फकदै गरेका बालबच्चा पानीमा भिज्न सक्छन् । तपाईं होसियार हुनुन्छ, वालवच्चा पानीमा भिज्छन् कि भनेर । त्यसैले उनीहरुलाई पानीमा ओत लाग्नका लागि अह्राउनुहुन्छ । रेनकोट, छाताको व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ । वालवच्चा पानीमा रुझ्यो भने चिसो लाग्छ । लुगाफाटो भिज्छ । लुगाफाटो धुने झन्झट भन्दा पनि बालबच्चालाई रुघा-ज्वरो..
के तपाईं तनावमा हुनुहुन्छ ? यसबाट छुटकारा पाउन के गर्ने ?
काठमाडौँ, ५ साउन साह्रै तनाव भयो, कस्तो तनाव भयो यार, कामै गर्न सकिएन….। यो तनावले पनि कहिले छाड्ने भएन…..। चिया पसलदेखि कर्पोरेट हाउससम्म तनावको प्रसंग सुन्न भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । किनभने अहिले सबै तिर तनावै तनाव छ । आजभोलि तनावरहित व्यक्ति फेला पार्नै मुश्किल छ । त्यसैले त कतिपय हास्य कलाकारहरुले दर्शकहरुलाई हँसाउनकै लागि भए पनि ‘तनावै तनाव छ…’ जस्ता..
काजुको सेवन डिप्रेसनको प्राकृतिक उपचार
कलैया, ४ साउन किन हुन्छ डिप्रेसन ? कुनै पनि काममा मन नलाग्नु, कुनै पनि कुराले खुसी नहुनु र दुःखको अनुभूति पनि नहुनु डिप्रेसनको लक्षण हो । डिप्रेसन मानसिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा मनमा अनौठा विचार आउँछन् । कुनै पनि कुराले मानिस हडबडाउने गर्छन् । डिप्रेसन र डाइबिटिज रोगबाट पीडित मानिसमा मुटु रोग, अन्धोपन र मष्तिष्कसँग सम्बन्धी रोग हुने सम्भावना..
मनसुनको सक्रियता सामान्य हुँदै, देशका मध्य र पूर्वी क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ, ३ साउन मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको दक्षिणतिर रहेकाले मनसुनी गतिविधि देशैभरि सामान्य सक्रिय रहेको छ । मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको दक्षिणबाट केही तल रहेकाले मनसुन पूर्ण सक्रिय हुन् अझै केही समय लाग्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीले बताउनुभयो । अहिले मनसुन देशभरि नै सामान्य सक्रिय छ भन्दै उहाँले पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने पश्चिम क्षेत्रमा..
तपाईंको बच्चाको उचाइ त ठीक छ ? यी हुन् उचाइ बढाउने उपाय
काठमाडौँ, ३ साउन । सन्तान अरुको अगाडि अग्लो देखियोस् भन्ने चाहाना सबैको अभिभावकमा हुन्छ । तर चाहेर पनि कति अभिभावकले आफ्ना सन्तानको हाइट अग्लो बनाउन सकिरहेका हुँदैनन् । धेरै जसो बच्चाको हाइट उनीहरुका आमा-बुबाको अनुसार नै हुन्छ, जसलाई हामी बंशाणु (जेनेटिक) गुण भन्छौ । तर कहिलेकाहिं अग्ला आमा-बुबाका सन्तान पनि होचा हुने समस्या हुन्छ, जसको कारण हो हार्मोन ग्रोथ नहुनु । आफ्ना बच्चाको..
पढेको कसरी सम्झिने ? स्मरणशक्ति बढाउने विशेष विधि
काठमाडौँ, २ साउन कोही कोही मानिस सानैदेखि जे भेटे पनि पढ्ने, जतिबेला पनि पढ्ने स्वभावका हुन्छन् । तर धेरैजसो मानिसका लागि पढ्नु रुचिको विषय हुँदैन । आफुभन्दा ठूलाले पढाइको महत्व सम्झाएर, नपढे भविष्यमा आइपर्ने समस्या देखाएर वा अनेक उपाय लगाएर पढ्न जोड दिने गर्दछन् । बाल्यावस्थामा विद्यालयमा साथीहरूसँग खेल्न पाइने तथा कुनै माया गर्ने शिक्षक–शिक्षिकाको माया पाइने लोभले पनि बालबालिका विद्यालय जान लालायित..
सिस्नो कहिल्यै खानुभएको छ ? यस्ता छन् फाइदाहरु
काठमाडौँ, १ साउन सिस्नो सवैले देखेको र चिनेको वनस्पति हो। पहिले पहिले सिस्नोलाई गरिबको खानाको रुपमा तुलना गरिने भए पनि पछिल्लो समय सवैले तरकारीका रुपमा प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ। शहर बजारमा पनि पछिल्लो समय सिस्नो बेच्न ल्याउने गरिन्छ। सुपर मार्केटमा समेत सिस्नोको पाउडर बनाएर बेच्ने गरेको पाइन्छ । सिस्नोमा क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन सी, फ्याट, कार्बोहाइड्रेट, फाइवर, फस्फोरस र आइरनजस्ता तत्त्व पाइन्छन्। सिस्नो गर्भवती..
बेलुका रुँदा तौल तीब्र रुपमा घट्ने नयाँ अध्ययनको खुलासा
काठमाडौँ, १ साउन मोटोपना कम गर्न विभिन्न तरिका अपनाए पनि धेरैको प्रयास पानीमै जाने गर्छ । तर एक नयाँ अध्ययनका अनुसार तौललाई रोएर पनि घटाउन सकिने खुलासा भएको छ । सुन्दा अचम्म लाग्यो होला तर यो वास्तविकता हो । एशियन वनमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार रुँदा हाम्रो शरीरमा कार्टिसोल नामको हर्मोनको श्राव हुने गर्छ । शरीरमा यो हर्मोनको स्तर बढ्दा तौलमा कमी..
काठमाडौँ, ३१ असार अधिकांश युवा आफ्नो रोजगारदाताका बारेमा जानकारी नलिई वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका पाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको अवस्था : आप्रवासी कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ विषयको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार अझै पनि ९६.०७ प्रतिशत युवा आफू कुन वैदेशिक रोजगारदाताको सम्पर्कमा जान लागेको भन्ने विषयमा जानकारी नरहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय एजेण्टले वैदेशिक रोजगारीमा..
किन पुरुषभन्दा महिला बढी बाँच्छन् ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी, ३० असार नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै महिलाहरूको औसत उमेर पुरुषको भन्दा बढी छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१६ मा जन्मिने मानिसहरू ७२ वर्षको औसत आयु लिएर जन्मिएका छन्। यो तथ्याङ्क लिङ्गका आधारमा औसत आयु छुट्टाउँदा भने महिलाको ७४ वर्ष दुई महिना र पुरुषको ६९ वर्ष आठ महिना भएको उल्लेख छ । एक सय वर्षभन्दा बढी जिउने महिलाको संख्या पुरुषका तुलनामा..
हरेक १ सेकेन्डमा एउटा सम्बन्धविच्छेद ! किन बढ्दैछ सम्बन्धविच्छेदको घटना ?
काठमाडौँ, ३० असार समाजमा विहेलाई पवित्र बन्धनको रुपमा लिइन्छ र जीवनमा विहे एकपटक मात्र गरिन्छ । विवाह दुई व्यक्तिबीचको आपसी सहमतिमा नै हुन्छ । पछिल्लो समय समाजमा व्याप्त विभिन्न बानी र संस्कारले वैवाहिक जीवनमा समस्या बढ्दै गएको छ । श्रीमान र श्रीमतीबीच बढेको असमझदारी सम्बन्धविच्छेदमा परिणत हुन धेरै समय नै नलाग्नु नै अहिलेको समस्या हो । सानोतिनो मनमुटावमा नै सम्बन्धविच्छेदको बाटो अपनाउँदा..
काठमाडौँ, ३० असार मनसुन न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभागमा अवस्थित रहेको अझै केही दिन देशभरि नै मनसुनी गतिविधि सक्रिय रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । बुधबारबाट न्यून चापीय क्षेत्र बङ्गालको खाडीमा बन्ने भएकाले न्यूनचापीय रेखा भारततिर रहने सम्भावना भएकाले आज र भोलिको तुलनामा बुधबारदेखि मनसुन कम सक्रिय हुने मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीले बताउनुभयो । “आज र भोलिलाई सतर्कता अपनाउनुपर्ने..
मनसुन आजबाट कमजोर बन्दै, नेपालमा भन्दा भारतमा सक्रिय
काठमाडौँ, २९ असार । शुक्रबारदेखि सक्रिय रहेको मनसुन आईतबारबाट कमजोर बन्दै गएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । न्यूनचापीय रेखा (वर्षा गराउने वायु) नेपालको तराई भू–भागमा अवस्थित रहेका कारणले मनसुनि गतिविधि सामान्य देखिए पनि विस्तारै कमजोर हुँदै जाने महाशाखाका मौसमविद् समीर श्रेष्ठले बताउनुभयो । आज देशका पूर्व र पश्चिमी तराईका धेरैजसो स्थानमा मनसुनी वर्षा हुने छ । भोलिबाट यो प्रणाली दक्षिर्ण..
चौँथो पतिसँग डिभोर्सपछि के गर्दैछिन् डोनाल्ड ट्रम्पकी ७० वर्षे पूर्वपत्नी इभाना ?
काठमाडौँ, २९ असार । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रोपटक राष्ट्रपति बन्ने चुनावी दौडमा लागिरहँदा उनकी पूर्वपत्नी के गरिरहेकी होलिन् ? कतिपयलाई त ट्रम्पकी पूर्वपत्नी इभाना ट्रम्प ७० वर्ष पुगिसकिन् भन्ने पनि थाहा नहोला । खासमा उनी अझै मोडलिङको मोहबाट टाढिन सकेकी छैनन् भन्ने शंकेत उनका पछिल्ला गतिविधिले देखाउँछन् । इभाना पछिल्लो साता मात्रै ‘नाइट आउट’मा रमाउँदै गरेको ‘गस्सिप’ बनेको छ । यतिसम्म..
सावधान ! कतै तपाइले प्लास्टिकको चामल त खाइरहनु भएको छैन, प्लास्टिकको चामल कसरी छुट्याउने (४ सरल तरीका)
काठमाडौं, २८ असार । पछिल्लो समय बजारमा प्लाष्टिकको चामल आईरहेको कुरा हामीले जताततै सुनिनछ । प्लाष्टिकको चामल बेचेको बहानामा केहि व्यापारीहरु पक्राउ परेको समाचारहरु पनि आइरहन्छन् । नक्कली चामलको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि निकै नै हानिकारक छ। यसले प्रजनन प्रणलीमा बाधा पुर्याउनुका साथै पेटसम्बन्धि विभिन्न समस्याहरु निम्त्याउँछ। त्यसैले तपाईंले प्लाष्टिकको चामलबारे थाहा पाउन निकै आवश्यक छ। यस बारे सावधान गराउन आज हामी तपाईंलाई..
काठमाडौँ, २७ असार । सडकमा पहिरो खसेपछि गए रातिदेखि विपी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ । गोलन्जोर र सुनकोशी गाउँपालिकामा विपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । गए राति गोलन्जोर गाउँपालिका–५ को सोलाभञ्याङ र खनियाखर्कको बीचमा सडकमा माथिबाट पहिरो खसेपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी उपरीक्षक चक्रबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सुनकोशी गाउँपालिका–१ कमरेमा पनि पहिरोका कारण..
काठमाडौँ, २६ असार पेटमा प्रकृतिले नै एसिड उत्पादन गराउँछ। हामीले खानासँग खाएको ब्याक्टेरिया मार्नेदेखि लिएर खानेकुरा पचाउने काम यही एसिडले गर्छ। यो एसिड निस्किएपछि यसबाट बच्न शरीरमा आफ्नै ‘मेकानिजम’ हुन्छ। कुनै कारणबस यो मेकानिजममा ह्रास आयो भने ग्याष्ट्रिक हुन्छ। ग्याष्ट्रिक हुँदा पेट पोल्ने, दुख्ने, ढ्याउ–ढ्याउ आउनेदेखि लिएर बढ्दै गएमा अल्सरसम्म हुन्छ।अल्सर बिग्रिँदै गएर रगत नै वान्ता हुनेसम्म हुन्छ। मानसिक तनाव धेरै हुनुका..
नेकपामा अर्को गाँठो फुक्योः यसरी मिल्यो कार्यविभाजन
काठमाडौँ, २६ असार । नेकपाले जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्ज भागबन्डा जिल्ला कमिटी पदाधिकारी चयनकै मापदण्डका आधारमा गर्ने भएको छ। साविक एमाले–माओवादीकै जिल्ला इन्चार्ज रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई नै इन्चार्ज/सह–इन्चार्ज बनाउने गरी केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्ने तयारी नेकपाले गरेको हो। अहिले समझदारी जुटाएको विधिका आधारमा कार्यविभाजन गर्दा जनप्रतिनिधि वा अन्य जिम्मेवारीमा रहेका केन्द्रीय नेता पनि पार्टी जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्जको जिम्मेवारीमा आउन सक्ने छन्। वरिष्ठ नेता नेपालसँग बसेर..
काठमाडौँ, २६ असार । कञ्चनपुर भीमदत्तनगरकी बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवीले भीमदत्त नगरपालिकाका जागिर पाएकी छन् । उनलाई दैनिक हाजिरीमा काम गर्ने गीर नगरपालिकाले नियुक्त गरेको हो । पति अर्की श्रीमतीसँग बाहिरै बसेको र परिवार धान्न गाह्रो भएको भन्दै दुर्गादेवीले जागिरका लागि निवेदन दिएपछि मानवीय हिसाबले नियम कानुनभित्र रहेर ‘डोर हाजिरी’मा नियुक्ति दिइएको भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र..
विवाहअघि युवतीसँग यस्तो झुठ बोल्छन् पुरुष
काठमाडौँ, २५ असार कुनै पनि युवतीलाई आफ्नो प्रेममा पार्नका लागि वा विवाहको लागि राजी गर्न युवाहरुले झुठको साहरा लिने गरेका छन् । युवतीलाई इम्प्रेशन पार्नका लागि युवाहरुका यस्ता झुठलाई थाहा पाउन वा पत्ता लगाउन सहज भने हुँदैन । हुन त विवाह भन्दा अगाडि वा कसैलाई पनि आफूसँग नजिक ल्याउन युवतीहरुले पनि धेरै कुरामा झुठको साहरा लिने गरेका हुन्छन् । आज हामी यहाँ युवाले..
मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपाल नजिक : देशभर वर्षा हुने
काठमाडौँ, २५ असार मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको सीमा नजिक रहेकाले आज देशभर वर्षा भइरेहको छ । अझै दुई÷तीन दिन देशभर मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले एक सूचना जारी गर्दै यो अवधिमा देशको केही स्थानमा भारी वर्षा हुने र एक\_दुई स्थानमा अति भारी वर्षासमेत हुने जनाएको छ । मौसमविद् राजु प्रधानाङ्गका..
काठमाडौँ, २४ असार प्रेम संसारको सबैभन्दा सुन्दर कुरा जसको परिकल्पनाले मात्र पनि आनन्दको अनुभुति गराउँछ । प्रेम बिनाको जीवनमा मानिस बाँच्न त बाँच्छ तर उसको जीवनको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले प्रेम जीवन जिउनका लागि अति महत्वपुर्ण छ । जब कोहि प्रेमको गहिराईमा डुब्न थाल्छ, त्यो गहिराईमा दुई प्रेमिहरु आफुमा हराउन थाल्छन् । प्रेमको चरम सिमामा पुगेपछि प्रेमिहरु आफुलाई एक-अर्कामा सुम्पिन्छन् । उनीहरु..
किन आउँछ आँखामा आँसु ? यस्ताे छ कारण
काठमाडाैं । आँखामा आइलिड हुन्छ, जहाँ आँसु उत्पादन गर्ने ग्रन्थि हुन्छ । र, आँखाछेउको तल–माथि दुवैतिर प्वाल हुन्छ । ग्रन्थिले आँसु उत्पादन गर्छ र प्वालबाट आपूर्ति हुन्छ । आँखाको सेतो भागमा पनि यसरी नै पानी सप्लाई हुन्छ । यसका साथै नाकलगायत शरीरका अन्य भागमा पनि प्वालका माध्यमबाट पानी सप्लाई हुने गर्छ । त्यस्ता प्वाल वा पानी सप्लाई गर्ने नली साँघुरो..
काठमाडौँ, २३ असार मनसुन सक्रिय भएसँगै आगामी चार दिनसम्म देशका अधिकांश स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । भारतमा रहेको न्यून चापीय रेखा (पानी पर्ने प्रणाली) उत्तर नेपालतर्फ सर्दै गएकाले नेपालमा मनसुनी गतिविधि सक्रिय भएको महाशाखाका मौसमविद् समिर श्रेष्ठले बताउनुभयो । उक्त न्यून चापीय प्रणाली चार\_पाँच दिनसम्म रहन सक्ने र त्यसपछि दक्षिणतिर सर्ने भएकाले नेपालमा..
Results 765: You are at page 10 of 26